Oriental style Villa & kwabelwana ichibi
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguClara
Umtsalane kakhulu weSitayile saseAsia esinefashoni yeTropical Classy villa enazo zonke izinto zale mihla kodwa ziyinyani, kwigadi eshibilikayo yetropikhi kunye nephuli yabucala ekwabelwana ngayo nevilla enye, 2+1 Amagumbi okulala A / C NGOKUGQIBELELEYO (imodyuli eyi-1), amagumbi okuhlambela ayi-3 abucala abucala.
Indawo entsha entle yokujonga ulwandle ene-a/c egcweleyo kwicala elineenduli le-Kep, ihonjiswe ngobumnandi, inedama ekwabelwana ngalo, kunye negadi yetropikhi. Inamagumbi okulala ama-2 anamagumbi okuhlambela e-ensuite kunye nelinye igumbi lokulala elinokusetyenziswa ngokuvala ngokuyinxenye indawo eyakhiwe ngenjongo kumgangatho ongaphezulu.
Zonke iindawo zineA/C kunye namagumbi okuhlambela abucala (i-3 iyonke).
Igadi kunye nedama lokuqubha
Nanini na kufuneka kuthathelwe ingqalelo iimfuno zeendwendwe
Uthutho lweTuk tuk, ibhayisekile kunye nerenti ye-mopad, iiteksi zifumaneka lula kwindawo ngamaxabiso afikelelekayo.
4.76 · Izimvo eziyi-93
Ifanelekile kwiintsapho, izibini, kwabo banandipha ukuthula, ubuhle kunye nokuphumla okusingqongileyo kweSitayile saseMpuma. Yonke into ingaphakathi kwemizuzu emi-4 kude nge-tuk tuk, indawo efihlakeleyo kodwa esembindini